» तोलामा ७०० ले घट्यो सुनको मूल्य
२०७७ मंसिर ४,बिहीबार १४:४५
काठमाडौँ । सुनको मूल्यमा आज गिरावट आएको छ । कोरोना भाइरसको खोपको सफलताका समाचार अन्तरराष्ट्रियरूपमा सार्वजनिक भएपछि त्यसको प्रभाव सुनको मूल्यमा समेत परेको छ । सोही कारण आज स्थानीय बजारमा समेत पहँलो धातुको मूल्य प्रतितोला रु ७०० ले ओरालो लागेको छ ।
त्यसैगरी तेजाबी सुन प्रतितोला रु ९३ हजार ९०० मा कारोवार भएको छ । बुधबार तेजाबी सुन प्रतितोला रु ९४ हजार ६०० मा कारोवार भएको थियो ।
यस्तै चाँदी भने प्रतितोला रु एक हजार २१५ मा कारोवार भएको छ । बुधबार चाँदी प्रतितोला रु एक हजार २३० मा कारोवार भएको थियो । बुधबारको तुलनामा चाँदी प्रतितोला रु १५ ले घटेको हो ।
सुनको मूल्य एक हजारको दरले घट्यो, तोलाको कति ?
शुक्रबार सुनको भाउ घट्यो, प्रतितोला कति ?
सोमबार सुनको भाउ बढ्यो
शुक्रबार सुनको भाउ बढ्यो, प्रतितोला कति ?
नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको भाउ बढ्यो, प्रतितोला कतिमा कारोबार हुँदै ?